Vatungamiri veNyika Vosangana muSouth Africa Panoparurwa Mitambo yeWorld Cup
Chikumi 10, 2010
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vari kuenda kuSouth Africa kunoona kuvhurwa zviri pamutemo neChishanu mutambo wenhabvu weWorld Cup 2010.
South Africa inoti yakakoka vatungamiri venyika dzose dzemuAfrica kuti vauye kuzoona kuvhurwa kwemitambo iyi. Vatungamiri vemuAfrica vanodarika makumi maviri vanonzi vachange vari panovhurwa mitambo iyi neChishanu, apo South Africa ichange ichitamba neMexico.
Asi mutungamiri weSudan, VaOmar al-Bashir, vanonzi havasi kuenda, sezvo hurumende yeSouth Africa, yakati inovasunga kana vakapinda munyika iyi. VaBashir vari kudiwa nedare repasi rose, reInternational Criminal Court, kuti vatongwe mhosva dzavari kupomerwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, mumwe wevakuru vakuru vachange vari kuSouth Africa vachiona kuvhurwa kwemitambo yenhabvu iyi. America iri mumakwikwi aya.
Pane mashoko anotiwo vamwe vevatungamiri vemuZimbabwe vakakumbira kusangana nemutungamiri weSouth Africa, uye vari muyananisi pagakava rezvematongerwo enyika muZimbabwe, VaJacob Zuma, kuti vakurukure nyaya yeZimbabwe.
Nhumwa yaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vabvuma kuti pane vakakumbira kusangana naVaZuma, asi varamba kutaura kuti ndiyani. Muzvare Zulu vati hazvisati zvazivikanwa kuti vakuru ava vachasangana here naVaZuma.
Pachine zvinetswa zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa muhurumende yemubatanidzwa.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaJames Maridadi, vaudza Studio7 kuti VaTsvangirai havana nguva yekusangana naVaZuma, sezvo zuva rose remusi weChishanu richange riri rekuvhurwa kwemitambo, uye Mugovera mangwanani, VaTsvangirai vanenge vodzokera kumusha.